नेपालको शिर नझुकोस् – TajaNepal
Home /Blog/नेपालको शिर नझुकोस्
कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मित्रराष्ट्र भारतको छोटो भ्रमणमा जाने तयारी हुँदैछ । नेपाल र भारतबीचको पुरानो सम्बन्धमा भारतले नेपालसँग योजनाहरू लिन्छ तर बनाउँदैन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी नेकपा एमाले अनभिज्ञ छैनन् । भारत नेपालको विकासमा बाधक छ, भारतकै उक्साहटमा नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको सरकारमार्फत् थुप्रै कारखाना, उद्योग र संस्थानहरू सखाप पारेको थियो । भारतको जीएमआर र सतलजले निर्माण गर्ने भनेर कब्जा गरेका पञ्चेश्वर परियोजना, हुलाकी सडक, मेची पुल, अरूण तेस्रो, अपर कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाहरू भारतकै कारण अलपत्र छन् । नेपालकै स्वामित्व, नेपालकै पौरखले बन्दै गरेको तामाकोसी जलविद्युत् परियोजना आंशिक रूपमा पूरा हुँदैछ । स्वदेशी लगानीका साना जलविद्युत् परियोजना धमाधम बन्दैछन् । नेतृत्व इमानदार भएको खण्डमा काम हुन्छ भन्ने प्रमाण यी हुन् । चीनले सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र मातातीर्थमा तीन वर्षमा निर्माण गरेर सुम्पिएको छ । त्यही समयमा भारतले नेपाल प्रहरीका लागि काभ्रेको बनेपामा निर्माण गर्ने गरी लिएको तालिम केन्द्रको निर्माण कार्य छोएको पनि छैन । छिमेकीको नाताले कूटनीतिक तहबाट भएका प्रयास दिएका वचनको विश्वास गर्नै पर्छ ।
तर भारतले सीमा मिच्न र सीमाका जनतालाई दुःख दिन नछाडेकाले नेपालको हकमा असल र इमानदार छिमेकी हुन सकेन । कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भारतले झुक्याएको छ । उनलाई उपहारका रूपमा भारतले नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाइदिन्छु भनेको थियो । नदीमा पानी बगेकै छ । भारतीय झूट आश्वासनमा नेपालका शासकहरू परेकै छन् । आफ्नो स्वार्थका निर्णय भारतले नेपालबाट जसरी पनि गराएका उदाहरणहरू छन् । राजनीतिक दलका भारतभक्त दलालहरू सबै पार्टीमा छन् । नेपालका नेता इमानदार भएको खण्डमा भारत जस्तो हेपाहा शक्तिसँग झुक्नुपर्दैन । महाकाली सन्धि गर्दा भएको राष्ट्रघातप्रति यो बेला खड्ग ओली कति सतर्क छन् ?
उनकै कारण हो, २०५४ सालमा महाकाली भारतलाई सुम्पिँदा नेकपा एमाले विभाजन भएको । महाकालीको अपराधले रू. १२ खर्ब १२ अर्ब नेपालले बर्सेनि पाउँछ भन्ने फन्टुसे हुङ्कार र महाकालीको विद्युत् स्याटेलाइटबाट चीनमा बेचिन्छ भन्ने सोह्रै आना झूटले को कति पानीमा छ, अहिलेको पुस्ता जानकार छ । काम पूरा नहुने सम्झौताको अर्थ छैन, देशमा राष्ट्रिय अस्मिता र आत्मगौरवका कुरा चर्का छन् । सार्वभौम अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । नाकाबन्दलाई प्रतिवाद गर्दाको आँटिलो स्वभाव यस पटक प्रमले देखाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? हिजो नाकाबन्दीसँग जुध्दा माओवादी साथमा थियो । आज यी दुई पार्टीबीचमा एकता पनि हुँदैछ । बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय सरकारले मोदी सरकारको कपट भिरेर फर्कने काम नगर ।